26 Agrịpa+ sịrị Pọl: “I nwere ike ịzara ọnụ gị.” Pọl wee setịa aka,+ na-azara ọnụ ya,+ sị:
2 “Banyere ihe niile ndị Juu na-ebo m ebubo ha,+ Eze Agrịpa, ana m agụ onwe m n’onye nwere obi ụtọ na ọ bụ n’ihu gị ka m na-azara ọnụ m taa,
3 karịsịa ebe ị bụ ọkachamara n’omenala+ niile nakwa n’arụmụka ndị dị n’etiti ndị Juu. Ya mere, ana m arịọ gị ka i jiri ndidi nụrụ ihe m nwere ikwu.
4 “N’ezie, n’ihe banyere otú m si bie ndụ+ na mbụ malite na nwata, n’etiti ndị obodo m nakwa na Jeruselem, ndị Juu niile
5 ndị maara m n’oge gara aga malite na mbụ maara na m biri ndụ dị ka onye Farisii,+ dị ka òtù nke kasị agbasosi ụdị ofufe anyị ike si dị,+ ma ọ bụrụ na ha ga-achọ ịgba akaebe.
6 Ma ugbu a, n’ihi olileanya+ nke nkwa+ Chineke kwere nna nna anyị hà, eguzo m dị ka onye a na-ekpe ikpe;
7 ebo iri na abụọ anyị nwere olileanya inweta mmezu nke nkwa a site n’ijesiri ya ozi dị nsọ ike abalị na ehihie.+ Eze, ọ bụ banyere olileanya a ka ndị Juu na-ebo m ebubo.+
8 “Gịnị mere unu ji chee na ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta ekweta na Chineke na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ?+
9 Mụ onwe m chere n’ime onwe m na m kwesịrị ime ọtụtụ ihe iji megide aha Jizọs Onye Nazaret.
10 Ọ bụkwa ihe a ka m mere na Jeruselem. Akpọchikwara m ọtụtụ n’ime ndị nsọ n’ụlọ mkpọrọ,+ n’ihi na m nwetara ikike n’aka ndị isi nchụàjà;+ mgbe a na-aga igbu ha, ana m akwado ka e gbuo ha.
11 Site n’inye ha ahụhụ ọtụtụ ugboro n’ụlọ nzukọ+ niile, agbalịrị m ịmanye ha ka ha hapụ okwukwe ha; ebe ọ bụkwa na m na-enwe ọnụma n’ụzọ gabigara ókè megide ha, eruru m n’ókè nke ịkpagbu ha ọbụna n’obodo ndị ọzọ.
12 “Mgbe m na-eme mgbalị ndị a, ka m ji ikike na ozi si n’aka ndị isi nchụàjà na-aga Damaskọs,+
13 n’etiti ehihie n’okporo ụzọ, eze, ahụrụ m ìhè karịrị mgbukepụ nke anyanwụ ka o si n’eluigwe nwuo gburugburu mụ na ndị so m na-eme njem.+
14 Mgbe anyị niile dakwara n’ala, anụrụ m otu olu ka ọ na-agwa m n’asụsụ Hibru, sị, ‘Sọl, Sọl, gịnị mere i ji na-akpagbu m? Ịnọgide na-agba ndụdụ e ji achị anụ ụkwụ na-eme ka ihe siere gị ike.’+
15 Ma asịrị m, ‘Ònye ka ị bụ, Onyenwe anyị?’ Onyenwe anyị wee sị, ‘Abụ m Jizọs, onye ị na-akpagbu.+
16 Otú o sina dị, bilie guzoro n’ụkwụ gị.+ N’ihi na ọ bụ nke a mere m ji mee ka ị hụ m, ka m wee họrọ gị ka ị bụrụ onye na-eje ozi na onye àmà+ nke ihe ndị ị hụrụ na ihe ndị m ga-eme ka ị hụ banyere m;
17 mgbe m na-anapụta gị n’aka ndị a na n’aka ndị mba ọzọ, bụ́ ndị m na-ezi gị ka ị gakwuru,+
18 ka i meghee anya ha,+ ka i mee ka ha si n’ọchịchịrị+ gaa n’ìhè,+ sikwa n’ikike Setan+ gakwuru Chineke, ka e wee gbaghara ha mmehie ha,+ ka ha wee nwetakwa ihe nketa+ n’etiti ndị e doro nsọ+ site n’inwe okwukwe n’ebe m nọ.’
19 “Ya mere, Eze Agrịpa, enupụghị m isi n’ọhụụ ahụ nke si n’eluigwe,+
20 kama ebu m ụzọ wetara ndị bi na Damaskọs+ ozi ahụ, wetakwara ndị bi na Jeruselem,+ na n’obodo Judia dum, nakwa ndị mba ọzọ+ ka ha niile chegharịa ma chigharịkwuru Chineke site n’ịrụ ọrụ kwesịrị nchegharị.+
21 Ọ bụ n’ihi ihe ndị a ka ndị Juu jichiri m n’ụlọ nsọ ma nwaa igbu m.+
22 Otú ọ dị, n’ihi na m nwetara enyemaka+ si n’ebe Chineke nọ, anọ m na-agbara ma ndị nta ma ndị ukwu àmà ruo taa, ma adịghị m ekwu ihe ọ bụla ma e wezụga ihe Ndị Amụma+ na Mozis+ kwuru na ọ bụ ihe ga-eme,
23 na Kraịst ga-ata ahụhụ,+ ọ ga-ekwusakwara ndị a na ndị mba ọzọ+ ìhè+ dị ka onye mbụ e si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite.”+
24 Ma mgbe ọ na-ekwu ihe ndị a iji zara ọnụ ya, Festọs kwuru n’oké olu, sị: “Ara na-agba gị,+ Pọl! Oké mmụta na-akpatara gị ara ọgbụgba!”
25 Ma Pọl sịrị: “Ara anaghị agba m, Onye Ukwu Festọs, kama, ihe m na-ekwu bụ eziokwu, ọ bụkwa okwu onye uche ya zuru okè.
26 N’eziokwu, eze bụ́ onye m ji nkwuwa okwu na-agwa okwu maara banyere ihe ndị a nke ọma; n’ihi na ekwetara m na ọ dịghị otu n’ime ihe ndị a nke ọ na-amaghị, n’ihi na ọ dịghị otu n’ime ihe ndị a nke e mere n’ebe zoro ezo.+
27 Eze Agrịpa, ì kwere ná Ndị Amụma? Amaara m na i kwere.”+
28 Ma Agrịpa sịrị Pọl: “N’oge na-adịghị anya, ị ga-eme ka m kweta ịghọ Onye Kraịst.”
29 Pọl wee sị: “Ekpere m na-ekpeku Chineke, ma ọ̀ bụ n’oge na-adịghị anya ma ọ bụ n’oge dị anya, bụ ka, ọ bụghị naanị gị, kamakwa ndị niile na-anụ olu m taa, bụrụ ụdị onye m bụ, ma e wezụga ịbụ ndị e kere agbụ ndị a.”
30 Eze ahụ wee bilie, gọvanọ ahụ na Benis bilikwara nakwa ndị ha na ha nọ ọdụ.
31 Ma ka ha na-apụ, ha malitere ịgwa ibe ha, sị: “Ọ dịghị ihe nwoke a na-eme kwesịrị a ga-eji gbuo+ ya ma ọ bụ kee ya agbụ.”
32 Agrịpa sịkwara Festọs: “A gaara atọhapụ nwoke a ma a sị na ọ kpọkughị Siza.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D44%26Chapter%3D26%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl